Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Soomaaliland oo maanta Maxkamad la horgeeyay – Kalfadhi
May 11, 2019 May 11, 2019 Kalfadhi
Ciidamada Booliiska Soomaaliland ayaa maanta isagoo Gacmo duub u xiran hor-geeyay Maxkamadda Gobalka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool, oo katirsan Golaha Wakiilada ee Soomaaliland islamarkaana ay dhowaan xireen Ciidamada Soomaaliland.
Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex Cabdi Qawdhan, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uusan u fariisan karin Dacwadda Xildhibaanka ilaa laga qaado Xasanaadda oo ay Baarlamaanka fariistaan waxa uuna Sharci darro ku tilmaamay Xeragga Xildhibaanka oo leh Xasanaad buuxda.
“Ma jiro Shacri ii ogolaanaya in aan qaado Kiis-ka Maxkamadeed ee Xildhibaan Dhakool ilaa Xasaanadda ay ka qaadaan Baarlamaanka” ayuu yiri Xildhibaan Guddoomiyaha Maxkamdda Gobalka Maroodi Jeex ee Soomaaliland Cabdi Qowdhan.
Ciidamada Booliiska Soomaaliland ayaa Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool, dib ugu celiyay xarunta Dembi Baarista ee Booliiska Soomaaliland halkaas oo ay sheegeen in ay ku baari doonaan eedeymaha Xildhibaanka loo heesto.
Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool, oo ka tirsan golaha wakiillada ayaa ka soo horjeestay xuska maalinta 18 May oo uu ku tilmaamay maalin madow, kadibna ciidamada ayaa xiray.